Fitsapana - ADN Fiaviana ara-Fitiliana ny ADN - MyHeritage - Ny mpahay lalàna ao Frantsa online!
Fitsapana - ADN Fiaviana ara-Fitiliana ny ADN - MyHeritage
Ny sasany aseho vaovao dia tsy maintsy ho tsiambaratelo
Ianao amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra amin'ny maha-mpikambana ao MyHeritageNandritra ny enina ambin'ny folo taona, MyHeritage efa nanampy olona an-tapitrisany mba hahitana ireo mpikambana vaovao ao amin ny fianakaviana sy ny hahita ny foko fiaviany.
Ny test ADN dia manolotra anareo ny zavatra niainany mba hahita izay mahatonga anao tsy manam-paharoa sy ny hianatra avy aiza ianao.
ADN MyHeritage dia afa-po mba hanatsara ny fiainantsika ny mpampiasa rehetra na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Taorian'ny taona maro ny mitady ny ray niteraka, ary izany dia tsy nahalala ny anarany, aho tamin'ny farany dia hita izany noho ny mifanandrify ADN ny MyHeritage.
Aho nitady ny biolojika ny fianakaviana nandritra ny fotoana ela, saingy tsy fahombiazana. Isaorana lehibe ny ADN-ny tahirin-kevitra fototra ny MyHeritage efa afaka mahita ny rahalahy sy anabavy. Izany ratra izay efa tao am-poko aho, dia fantatro fa nanana rahavavy, ankehitriny dia sitrana. Izaho efa nahita azy. Ho ela velona ny siansa. Ho ela velona ny test ADN MyHeritage. Ny test ADN dia nanampy ahy hahatakatra tsara kokoa ny fakany sy ny fototarazo sangan asa, sy nitarika ahy mba hahita vaovao ny ray aman-dreny. Tena manoro hevitra ny ADN MyHeritage. Manao test ADN izany dia nanampy ahy hanamarina ny tetiarana sy hifandray kokoa ny havany, anisan'izany ny dadatoako, mandritra ny fotoana very.
Izaho efa olon-dehibe, rehefa nahita fa efa nandray zaza
Tena faly aho mba ho afaka mahafantatra tsy amim-pisalasalana ny fomba ahafahantsika mifandray.
Ny nahitana fa efa nataoko eo MyHeritage ADN dia nitondra vaovao be dia be ny olona teo amin'ny fiainako.
Izany no tena mahavariana ny mahita ny fitoviana ara-batana eo amintsika sy hahafantatra tsara kokoa ny tenantsika. Tena faly aho mba hanao io dia io. Ny toerana ny razana dia nahita toy ny an-trano, dia voaaro ao amin'ny ADN. Ny vondrona ara-poko nentim-paharazana avy izany faritra ara-jeografika sy ny gene dobo faritry.
Isika handinika ny ADN mba hamantarana ny zavatra ny ampahany dia tombanana eo amin'ny fototry ny isan ny efa-polo roa fiaviany misy - ny lehibe indrindra dia maro natolotry ny asa fanompoana, ny lehibe ny ADN-ny test.
Izahay dia mitady olona manana ADN mifanaraka anao aho. Ny teknolojia mifanaraka ADN manambara ny isan-jaton'ny ADN anao hizara ny ray aman-dreny, izay mampiseho aminao ny fomba ianao dia mifandray akaiky ireo. Azonao atao ny mifandray amin'ny ny ray aman-dreny vaovao mba hianatra bebe kokoa momba ny fianakaviana sy ny hahita ny razambe iombonana. Amin'ny MyHeritage, ny fiainana manokana sy ny fiarovana ny tahirin-kevitra dia ny maha-zava-dehibe ho antsika tahaka ny anao. Efa nanao manan-danja ny fampiasam-bola mba hahazoana antoka fa ny tantara sy ny manokana ny tahirin-kevitra dia azo antoka sy voaaro amin'ny maro sosona ny fanafenana. Amin'ny rehetra ny fitsapana dia atao ao amin'ny voamarina laboratoara CLIA amin'ny Kanada sy Etazonia. Amin'ny MyHeritage ADN dia afaka mahita ny havany izay tsy mahalala mialoha sy izay mitovy ny fizarana ny ADN amin'ny ianareo, dia nandova avy amin'ny iray razambe iombonana. Ianareo dia hahita ny foko niaviany sy ny jeografia ny razambeny, ary izany dia mety misy zavatra tsy ampoizina amin'ny fivarotana.
Izany no nanolorana azy ho fitsapana hafa ao amin'ny fianakaviana.
Ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fianakaviana mitondra tsy manam-paharoa tapa ny ADN, izay afaka hiara-hamaha ny tantaran ny fianakaviana. Hizaha toetra iray na roa amin ny ray aman-dreny, ianao dia afaka ny hahazo fanazavana fanampiny momba ny lalao ADN. Fitsapana ny ray aman-dreny, ny rahalahy sy rahavavy malala, zanaky ny mpiray tampo, ary ny hafa-ny havany no tena ilaina ihany koa ny mahita ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny sy mba hianatra bebe kokoa momba ny lalao.
Satria ny toetry ny fototarazo lova, ny rahalahy sy rahavavy mety hahazo vokatra hafa ara-poko ho anao.
Mampitaha ny vokatra dia afaka manampy anao hianatra bebe kokoa momba ny razambeny. Ny ADN fitsapana ny MyHeritage mamela anao mba tsy manam-paharoa mifanaraka amin'ny mpampiasa izay tsy maintsy atao ny test ADN amin'ny MyHeritage ary koa ny taratasy amin'ny mpampiasa izay tsy maintsy alaina ny valim-pifidianana, ireo avy amin'ny mpamatsy hafa, amin'ny MyHeritage. Noho ny karazany ary ny iraisam-pirenena ny fisian'ny MyHeritage kokoa noho ny efa-polo teny, dia manana bebe kokoa ny vintana ny fananana ny fifaneraserana miaraka amin'ny fianakaviana izay mipetraka any amin'ny firenena hafa.
Ianao koa mahazo ny famakafakana ny foko feno amin'ny MyHeritage avy amin'ny vondrona lehibe indrindra ny fiaviana ara-poko araka izay azo atao amin'ny ny orinasa.
Rehefa mametraka ny baiko an-tserasera, azonao atao na ny mandefa ny kit ho anao, na hanome ny fanaterana ny adiresy ny mpandray ary dia an-tsambo ny ADN kit mivantana ianao.
Indray mandeha dia nandray ny ADN maika fa ianao no nividy azy, dia angataho izy ireo mba hanokatra kaonty maimaim-poana MyHeritage, raha tsy efa manana ny iray, ary mampihetsika ny vaovao maika. Raha vao mampiasa ny fitaovana, dia handefa anareo mailaka mety ho ny fanaraha-maso ny fanangonana ary mazava ho azy ny vokatra haingana araka izay azo atao. Ny kit MyHeritage test ADN dia tsotra ny fampiasana, ary tsy mitaky fandraisana ra na ny rora. Mba hanangona ny santionany, fotsiny ianao dia hofafako hiala ny ao anatiny amin'ny takolaka amin'ny buffer kely noho ny efa-polo dimy segondra, ary mamerina izany amin'ny faharoa buffer toy ny nomaniny ho solon'izay. Ny buffers dia apetraka ao amin'ny lovia fito feno sy nalefa tany amin'ny laboratoara fa ny ADN-ny fanadihadiana. Ny vokatra dia hita ao amin'ny Tranonkala MyHeritage, ka afaka mijery izany soa aman-tsara. Raha vao ny maika efa tonga ao amin'ny laboratoara, dia haka telo na efatra herinandro mba hahazoana vokatra. Raha vao ny vokatra azo, dia hampahafantatra anao amin'ny alalan'ny mailaka sy ny vokatra dia ho hita an-tserasera. Ny test ADN MyHeritage mampiasa ny fitsapana eo amin'ny micro-tambajotra sy ny autosomal ADN. Fitsapana ity dia manome ny manta tahirin-kevitra izay hanampy antsika mba manao kajy ny taratasy ny ADN sy ny foko hafa fiaviana rehetra ny andalana no razany, avy amin'ny rainy sy ny reny. ADN sy ny genealogical hazo hafa mifameno.
Ny ADN dia azo ampiasaina mba hanaporofoana na hitsipaka ny fifandraisana voarakitra-tetiaran'ny fianakaviana.
Ohatra, raha toa ka misy olona iray hafa amin'ny anaran'ny fianakaviana na ny tompon'ny genealogical hazo, izay tsy maintsy ho marani-Tsaina ny Lalao, azonao atao, ny olona rehetra, manao test ADN MyHeritage ho fantatrao ianao raha tena mifandray. Mifanohitra amin'izany, ny genealogical hazo ny inestimable-danja noho ny fahatakarana ny fifandraisana ny fifandraisana ADN.
Ny fananganana ny fianakaviana hazo no soso-kevitra ho an'ny olona izay manao test ADN mba hitondra ny tsara indrindra ny tombony azo amin'ny vokatry ny fitiliana ADN, ary mba hahita ny tantara feno ny fianakaviana.
MyHeritage manome fitaovana tsara ny mamorona ny fianakaviana iray hazo ary ahitana, enina lavitrisa ara-tantara ny tahirin-kevitra mba hahatonga izany ho mahafinaritra sy mora ho an'ny fivelaran ny hazo.
Ny fitantanana ny ady amin'ny insurer, sekoly - Ooreka